UV mpanamboatra sy mpamatsy UV China UV LED Factory
Fahombiazan'ny hazavana avo lenta miaraka amin'ny andiany 2835 UVA
Famaritana momba ny vokatra Ny taratra ultraviolet dia karazana taratra elektrômanetika, izay tsy hita maso fa ampahan'ny taratra elektromagnetika hafa ankoatry ny fahazavana volomparasy hita. Ny elanelam-pandrefesana taratra ultraviolet dia 100-380nm, ary ny loharano voajanahary ultraviolet taratra dia ny tara-masoandro. Manana andraikitra lehibe amin'ny fiainana eto an-tany izy io, matetika miankina amin'ny toetrany. Ny loharano maivana UV dia be mpampiasa amin'ny fanamainana lovia, fipoahana, fanasitranana jiro ary fitaovana hafa, ao amin'ny ...
Fahombiazana haingana fanasitranana 5054 UV LED
Famaritana momba ny vokatra Ny taratra ultraviolet dia karazana taratra elektrômanetika, izay tsy hita maso fa ampahan'ny taratra elektromagnetika hafa ankoatry ny fahazavana volomparasy hita. Ny elanelam-pandrefesana taratra ultraviolet dia 100-380nm, ary ny loharano voajanahary ultraviolet taratra dia ny tara-masoandro. Manana andraikitra lehibe amin'ny fiainana eto an-tany izy io, matetika miankina amin'ny toetrany. Ny loharano maivana UV dia be mpampiasa amin'ny fanamainana lovia, fampahafantarana, fanasitranana jiro ary fitaovana hafa, ao amin'ny PCB ...
Fahamendrehana avo 3535 jiro UVC LED
Famaritana ny vokatra Ity loharanom-pahazavana LED 3535 ity dia fitaovana mahomby amin'ny angovo avo lenta izay mahazaka onjam-pamokarana hafanana sy avo. Ny loharano maivana LED Ultraviolet miaraka amin'ny halavan'ny halavan'ny volony manomboka amin'ny 270nm ka hatramin'ny 285nm. Ity ampahany ity dia misy dian-tongotra izay mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny habe mitovy amin'ny LED eny an-tsena ankehitriny. Size: 3.5 x 3.5 mm hateviny: 1.53 mm Endri-javatra lehibe ● Azo ianteherana avo ● LED UV lalina misy halavan'ny emission eo anelanelan'ny-270nm ka hatramin'ny 285nm ● Mifanaraka amin'ny solder ...